प्रचण्डसंगको पहिलो अन्तरवार्तामा किन डरले थरथर कामेका थिए भुषण दाहाल ? (भिडियो) -
प्रचण्डसंगको पहिलो अन्तरवार्तामा किन डरले थरथर कामेका थिए भुषण दाहाल ? (भिडियो)
काठमाडौँ । नेपाली टेलिभिजन इतिहासमा निक्कै चर्चित नाम हो भुषण दाहाल । पछिल्लो समय कान्तिपुर टेलिभिजनद्वारा प्रसारित टक शो फायर साइडबाट भुषण दाहालले राजिनामा दिएका छन । उनले उक्त शो १८ वर्ष सम्म चलाएका थिए ।
दाहाल टेलिभिजनमा प्रश्न गर्ने मात्र हैन धेरै म्युजिक भिडियोका निर्देशक पनि हुन् । उनले निमा रुम्बा, रामकृष्ण ढकाल, राजेश पायल राई, १९७४ एडी, ओम बिक्रम बिष्ट, योगेश्वर अमात्य, न्यु बज्राचार्य जस्ता नेपाल कै चर्चित गायकहरुको म्युजिक भिडियो निर्देशन गरिसकेका छन । नेपथ्य ब्याण्डको अत्यन्तै चर्चित गित ‘सा कर्णाली’ गित पनि भुषणले नै निर्देशन गरेका थिए ।
कान्तिपुरबाट राजिनामा दिए पनि आफु टेलिभिजन कै मान्छे भएको र फेरी पनि यहि केहि गर्ने बताएका छन । कुराकानीको क्रममा भुषण दाहालले पहिलो पटक पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसंग अन्तर्वार्ता लिदा खुट्टा थर थर कामको बताए । पुरा कुराकानी तल हेर्नुहोस ।